Ireo tantara foronina tsara indrindra ankehitriny
Fanamarihana ireo tantara foronina ankehitriny
The Third Paradise, nataon'i Cristian Alarcón
Ny fiainana dia tsy vitan'ny hoe mandalo fotsiny eo anoloan'ny voalin'ny hazavana farany manafintohina (raha tena mitranga tokoa izany, mihoatra noho ny tombantombana malaza momba ny fotoana hahafatesana). Raha ny marina dia manafika antsika amin'ny fotoana tsy ampoizina indrindra ny sarimihetsika. Mety hitranga ao ambadiky ny kodiarana izany mba hisarihana antsika…
Ao amin'ny Lake Success, nataon'i Gary Shteyngart
Mety ho i Ignatius Reilly dia tonga nofo ad hoc an'i Don Quixote. Farafaharatsiny amin'ny heviny momba ilay adala niraikitra teo amin'ny sehatry ny ady amin'ny korontam-drivotra nataon'ny saina mihoa-pampana. Ary tsy isalasalana fa manana be dia be i Barry Cohen, ilay mpilalao sarimihetsika amin'ity tantara Gary Shteyngart ity…
Fahazavana fahavaratra, ary aorian'ny alina, nataon'i Jón Kalman Stefánsson
Mahay mamirifiry amin'ny toerana toa an'i Islandy ny hatsiaka, izay efa voavolavolan'ny toetrany ho toy ny nosy mihantona any amin'ny Atlantika Avaratra, mitovy elanelan'i Eoropa sy Amerika. Inona no loza ara-jeografika tokana mba hitantarana ny mahazatra amin'ny maha-tokana ny sisa...
Ny Mpamboly, ny mpanao sokitra ary ny mpandositra, nataon'i César Aira
Ny mpanoratra manaja tena dia tsy maintsy mijery ity asa manakorontana ity, tsy amin'ny asany ihany, fa amin'ny literatiora amin'ny ankapobeny. Ary César Aira dia tsy ho latsa-danja satria ny avant-garde dia manara-penitra. Ary tsy ratsy mihitsy...
Ny bokin'ny fitiavana rehetra, nataon'i Agustín Fernández Mallo
Manana fahafahana hamonjy antsika ny haisoratra. Tsy resaka fieritreretana intsony ny trano famakiam-boky ahafahan'ny zanaky ny mandinika ny eritreritra, ny siansa ary ny fahalalana napetraka ao anaty boky ho toy ny patanty amin'ny involution tsy azo ihodivirana. Fantatsika fa tsy hisy na inona na inona ho tavela ela be. Izany no mahatonga ny...
Tantara mampihomehy, nataon'i Luis Landero
Ny tantaran'ny tantaram-pitiavana rehetra, na amin'izao fotoana izao na lavitra, dia mety tsy hitovy be amin'ny lafiny romantika. Satria ny tantaram-pitiavana amin'ny transcendent, araka ny lazaiko tsy misy ifandraisany amin'ny karazana mavokely, dia milaza amintsika momba ny fihetseham-po tsy azo ihodivirana noho ny toe-piainana ara-tsosialy, satria ...
Aza esorina aminao ny satro-boninahitrao, nataon'i Yannick Haenel
Ankafizinay ny fotoana mamiratra izay niakaran'ny lehilahy iray avy tao amin'ny lavenonany mba handehanana any amin'ny fisidinan'ny eritreriny. Ny faharesen-dahatra amin'ity fihaonana amin'ny dikan'ny fiainana ity dia manamarina ny epic. Vao mainka aza izany rehefa mipoitra toy ny ...